Dowladda Soomaaliya dalka ku soo celisay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa dalka Keeniya. - Hargeele - Wararka Somali State
Dowladda Soomaaliya dalka ku soo celisay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa dalka Keeniya.
Muqisho:(SONNA)-Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa markii 4-aad Muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku Xayirnaa dalka Kenya dib ugu soo celisay gudaha Soomaaliya, iyadoo la fulinayo amarkii Madaxweynaha Jamuuriyada Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo ee ahaa in dadka Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ku xayiran in dib loo soo celiyo .
Dowlaada fadareraalka Soomaliya ayaa dadaal badan ku bixasay in ay ka soo daadgureeyso muwaadiniin Soomaaliyeed dalal dhowr ah oo ay ku xanibnaayeen si ay u soo guryo noqdaan.
Dhageysiga dacwadi loo haystay xubno ka tirsan Wasaaradda Caafimaadka oo ka socta Maxkamadda gobolka Banaadir
Ra’iisul Wasaare Khayre oo baaq u diray Ummadda Soomaaliyeed+Sawirro